မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): FB ပေါ်က ကောင်မလေး က ရည်းစား စကား လာပြောသောအခါ 😜-💥ရယ်နိင်မှ ဖတ်ပါ💥😜😜
FB ပေါ်က ကောင်မလေး က ရည်းစား စကား လာပြောသောအခါ 😜-💥ရယ်နိင်မှ ဖတ်ပါ💥😜😜
᠌᠌တိန်​.. တိန်​… တတိန်​တိန်​
ကြည့်​လိုက်​​တော့ facebook မှာ friend လာ add ထားပါလားးးအယ်​..​ မိန်းက​လေး ဗျ……. နာမည်​​လေးက ချာတိတ်​မ​လေးတဲ့.. အဟိအာ့နဲ့.. လက်​ခံလိုက်​တယ်​​လေ
messenger က​နေ လာ hi တယ်​
ကျူပ်​လဲ ပြန်​ hi တာ​ပေါ့….
“ချစ်​တယ်​ ကိုရယ်​ ချစ်​လို့ရလားဟင်​”
“ကွကို​တောင်​ အံ့​အော တယ်​…”
“ဘယ်​လို.. ဘယ်​လို.. ဘယ်​လို”
“ရမ်းချစ်​တယ်​ ကိုကို ”
facebook သုံးလာတာကြာပြီ ရည်းစား စကား​ပြောဖို့ ​နေ​နေသာသာ
ကိုယ်​က hi ရင်​ ပြန်​ hi ဖို့ရာ မနည်းဆု​တောင်းယူရတယ်​..
“မှားပါဘူး ကိုကို… ကိုကို့ ကို မြင်​မြင်​ချင်း ချစ်​မိသွားလို့ပါ”
“ကျွန်​မ ကို ပြန်​ချစ်​ပါ​နော်​”
“​ နောက်​တယ်​​နော ညီမ က”
“​ နောက်​ဖူး အတည်​”
“ဟွာ​လေ ညီမ ရဲ့ photo လဲ မြင်​ရဘူး​လေ
profile ကလဲ ကာတွန်းပုံကြီးဆို​တော့ ညီမရ ယ်​ အယ်​ကို့်​ကို
photo​ လေး ပို့​ပေးပါလားဟွင်​”
“ဘာလဲ photo မြင်​ရမှ ပြန်​ချစ်​မှာလား”
“ဟုတ်​ပါဝူး သ​ဘော​ပြောတာပါလို့​နော်​ ညီမ​ငေး”
မလုပ်​နဲ့ တော်​ကြာစိတ်​ဆိုးသွားလို့ ချစ်​တယ် ​​​လို့​ပြောထားတာ ပြန်​ရုပ်​သိမ်းသွားဦးမယ်​.. ရှားရှားပါးပါး ဒီတစ်​ခါ ကြုံဖူးတာ​လေးကိုဗျ
“​ ပြောဦး​လေ အ​ဖြေပြန်​​ပေးကွာ ကိုကို”
“အမငှီး…. ရှက်​​သွေး​ တွေ​တောင် ​ဖြာသွားတာဖဲ”
ညယ်​မက​လေ အယ်​ကို့ ဓာတ်​ပုံ​ ကို မြင်​ကတည်းက
ချစ်​မိသွားတာပါ… ညယ်​မကို ပြန်​ချစ်​ပါ​နော်​ ကိုကို”
တောက်​…. ကွကိုယ်​​ချောမှန်း ခုမှသိ​တယ်​ကွာ
ကောင်​မ​လေး သနားပါတယ်​.. ကျူပ်​ဓာတ်​ပုံကိုကြည့်​ပြီး
” အယ်​ကို က အသက်​ ဘယ်​​လောက်​ရှိပြီလဲဟင်​”
အယ်​… ၁၈နှစ်​ပြည့်​လို့ ​တော်​​သေးတယ်​…. ဟူးးးးး
“ညယ်​မ ကို ချစ်​လားလို့ ​မေး​နေတယ်​​လေ”
“မဖြစ်​ဘူး မဖြစ်​ဘူး မြန်​မြန်​အ​ဖြေပြန်​​ပေးမှ
“ချစ်​တာ​ပေါ့လို့…. အရမ်း ချစ်​တယ် ​ကွာ”
“​ ခေးနဲ့အတူတူ လျှောက်​လယ်​မယ်​”
“​ ပျော်​ပီ​လေ ကိုကို ရယ်​”
“​ ခေးရယ်​ ချစ်​သူ​ တွေဖြစ်​သွားပြီပဲ
“ဟုတ်​. ကိုကို ခဏ​စောင့်​​နော်​”
“ဟိုက်​… ​တော်​​တော်​​ချောပါလားဟ ချစ်​စရာ​လေး
ဘယ်​လို​တောင်​လှ​နေတာလဲ ခေးရယ်​…… ​ကြွေပြီ​လေ”
“ချစ်​​လေး… ဒါက ချစ်​ပုံလားဟင်​”
အလဲ့… လာခဲ့စမ်း… အိပ်​မက်​ထဲထိ ဆွဲ​ခေါ်လိုက်​မယ်​
“မယုံရင်​ video call ခေါ်လိုက်​​လေ ကိုကို”
“ဘယ်​​နေမလဲ vedio call ချက်​ချင်း​ခေါ်လိုက်​တယ်​​လေ”
ကျူပ် ​တူမ​လေး ဖြစ်​​နေတယ်​​လေ
အားပါးတစ်​ရ ရယ်​​နေလိုက်​တာများ သူကလုပ်​ပြ​နေ​သေးတယ်​
လက်​ညိုး​လေး​ကွေးပြီး က​ရော်​ က​ရော်​..ရှက်​ရှက်​တဲ့”
ပို့​ပေး​တော့ တစ်​ခြားပုံ​လေ ဘယ်​သိမှာလဲလို့
ကျူပ်​လဲရှက်​ရှက်​နဲ့ အိမ်​ အ​ပေါ်ထပ်​​ပြေးတက်​ပြီး
လူကြီး ကို ​နောက်​စရာလားဆိုပြီး​တော့
ဒါ​တောင်​ ရယ်​​နေ​သေးတယ်​ က​လေးမ က ပြော​သေးတယ်​..ဘာတဲ့
မုန့်​ဝယ်​​ကျွေးမယ်​ဆို ဦး​လေး… ဝယ်​​ကျွေး​လေတဲ့
ဝေး​သေးတယ်​ အမ​လေး တစ်​သက်​လုံး ဝယ်​မ​ကျွေးဘူး
“ခု​ခေတ်​ က​လေး​တွေ မနိုင်​ဘူး တကယ်​ပဲ”
Author MSSK at 1:42:00 PM